ब्रायन एडम्सको स्वरमा आज काठमाडौं गुन्जँदै… | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← कसरी भयो क्रिकेटको विकास ? क्रिकेटको नालीबेली…
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको लागि कुवेतको ग्रिन आईल्याण्डमा बनभोज कार्यक्रम हुँदै →
ब्रायन एडम्सको स्वरमा आज काठमाडौं गुन्जँदै…
सुरज कुँवर, सुरक्षाका लागि ६४ वटा सीसीटीभी जडान, करिब ५ हजार प्रहरी परिचालन
-सोल्टी होटलको सुइटमा बस्ने ५१ वर्षे यी गायक दूधका परिकारसमेत नखाने शाकाहारी हुन्, जसले भान्से पनि सँगै ल्याएका छन्
-१५ वर्षमा स्कुल छाडेका ब्रायन गायनमा लाग्नुअघि भाँडा माझ्ने र पाल्तु जनावरलाई खुवाउने काम गर्थे
प्रेम, सम्बन्ध र जीवनका गीत गाउने विख्यात गायक ब्रायन एडम्सको स्वरले शनिबार (आज) साँझ गुन्जँदै छ काठमाडौं । मुख्यतः सन् ८० को दशकदेखि गीत र स्वरले विश्व संगीतमा आफूलाई सधैं उचाइमा राख्दै आएका गायक शनिबारै निजी विमानमा ढाकाबाट काठमाडौं आउने छन् । साँझ ८ बजेदेखि दुई घन्टा ब्रायनले डेढ दर्जनजति गीत दशरथ रंगशालामा गाउँदा उनलाई सुन्न कम्तीमा २० हजार नेपाली र विदेशीको उपस्थिति आयोजकले अपेक्षा गरेका छन् । गत वर्षदेखि ‘ब्रायन एडम्स लाइभ फुल ब्यान्ड’ नामको विश्वयात्रामा रहेका यी गायकले केही दिनयता भारत र बंगलादेशमा प्रस्तुति दिएका छन् ।
शनिबारको रात राजधानीको सोल्टी होटलमा बस्ने क्यानडेली गायकलाई आइतबार बिहान पर्वतीय उडानमा जान प्रस्ताव गरिएको छ, जसलाई उनले अन्तिम स्वीकृति दिइसकेका छैनन् । पर्यटन वर्ष सुरु भएको केही सातामै नेपाल आउने सबैभन्दा उच्चकोटीका यी पाहुना सौखिन फोटोग्राफर पनि हुन् । उनलाई हिमाली उडानमा लैजान सके नेपाली पर्यटकीय गन्तव्यको विश्वव्यापी प्रचार हुने पर्यटन व्यवसायीको विश्वास छ । एडम्सको कार्यक्रममा रंगशालामा स्थापित स्टेज तथा ध्वनि प्रणालीका लागि भारत र बेलायतबाट झिकाइएका उपकरणको ग्यारेन्टी नेपाल पर्यटन बोर्डले लिएको छ ।
एडम्सका लागि एक बहुराष्ट्रिय पार्सल कम्पनीका नाममा बुक गरिएको सोल्टीको सुइटमा यसअघि नेपाल आउने विदेशी राष्ट्रप्रमुखहरू बस्ने गरेका थिए । उपलब्ध गराइने सुविधाअनुसार प्रतिरात करबाहेक आठ सयदेखि १२ सय डलरसम्म पर्ने सुइटमा बस्ने ५१ वषर्ीय एडम्स दूधका परिकारसमेत नखाने शाकाहारी हुन् । उनीसँगै उनका भान्से पनि आउने छन् ।
सुकेको स्वरमा गितार बजाउँदै मन जित्ने गीतहरू गाउने एडम्सलाई स्टेजमा उनका साथीहरू ड्रमर मिक्की कुरी, लिड गिटारिस्ट किथ स्कट, बासिस्ट नोरम्यान फिसर र किबोर्डम्यान गेरी बि्रटले साथ दिनेछन् । त्यसबाहेक उनको समूहमा ध्वनि इन्जिनियर र मेकअप म्यानसहित ३५ सहयोगी रहने छन् । रंगशालामा ब्रायनलाई नेपाली सांगीतिक टोलीहरू १९७४ एडी, मंगोलियन हर्ट, रवीन एन्ड द न्यू रिबोलुसन र नमस्ते ब्यान्डले साथ दिनेछन् ।
काठमाडौंमा रहुन्जेल एडम्सको सुरक्षा जिम्मा नेपाल प्रहरीले लिनेछ । महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयले एडम्सको कार्यक्रमका लागि पाँच हजारजति सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने बताएको छ । आयुक्त कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी माधव नेपालका अनुसार कन्र्सटका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय र उपत्यकाभित्रका सबै चौकीका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने छ । कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी र निजी सुरक्षा कम्पनी ‘गरुड’ का सुरक्षाकर्मी पनि खटाइने छन् ।
रंगशालाको छाना भएको दर्शकदीर्घाअगाडि फुटबल मैदानमै बनाइएको ६ फिट अग्लो स्टेजबाट आउने ब्रायनको स्वरलाई उपस्थित सबै दर्शकका कानसम्म उत्तिकै राम्रो गरी पुर्‍याउने उद्देश्यले ध्वनि प्रणाली स्थापित गरिएको छ । त्यो काम गर्न भारतबाट ध्वनि इन्जिनियरहरू आएका छन् ।
दर्शकका गतिविधि नियाल्न रंगशालामा ६४ वटा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएका छन् । रकवेल इन्टरनेसनल नामको नेपाली कम्पनीले जोडेका ती क्यामेराबाट आएका दृश्यलाई रंगशालामै रहेका तीनवटा नियन्त्रण कक्ष्ा र रानीपोखरीस्थित प्रहरी आयुक्त कार्यालयबाट नियालिने छ । मादक पदार्थ सेवन गरेर जानेलाई प्रहरीले छिर्न दिने छैनन् । हूलदंगा गर्ने तथा अमर्यादित कार्यमा संलग्न हुनेलाई प्रहरीले कारबाही गर्ने बताएको छ ।
दुई हजार, चार हजार र छ हजार रुपैयाँका टिकट किनेर रंगशाला जाने दर्शकलाई झोला र पानीका बोतल नल्याउन आयोजकले आग्राह गरेका छन् । दिउँसो २ बजेदेखि खुला हुने रंगशालामा जानेका सवारी साधन पार्किङको व्यवस्था खुलामञ्चमा गरिएको आयोजकहरू जेपीआर इभेन्ट र ओडिसी नेपालले बताए ।
नेपाल आएर गाउने ब्रायन सम्भवतः पहिला अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त पश्चिमा गायक हुन् । उनको नेपाल आगमनलाई लिएर अंग्रेजी संगीतप्रति रुचि राख्ने तथा पर्यटन व्यवसायीमा व्यापक उत्सुकता छाएको छ । उनीहरूले आपसका भेट र इन्टरनेटका पन्नाहरूमा त्यस्तो उत्साह व्यक्त गरेका छन् । शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका डा. सवास प्याकुरेलले एडम्सलाई फेसबुकमा खुला पत्र लेख्दै विश्वमञ्चमा नेपालका सद्भावना राजदूत होइदिन आग्रह गरेका छन् । ‘समर अफ सिक्टिनाइन’, ‘एभि्रथिङ आई डु’ र लेट्स मेक अ नाइट टु रिमेम्बर’ जस्ता विश्वभरि लोकपि्रय गीत गाएका एडम्सले १९८० मा पहिलो एल्बम आफ्नै नामबाट सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसयता उनले २० वटा एल्बम ल्याएका छन् । उनका एल्बमका करिब ७ करोड प्रतिहरू बिक्री भएका छन् । अमेरिकी संगीत पत्रिका ‘रोलिङ स्टोन’ का अनुसार संगीतमा लाग्नुअघि एडम्सले युवा उमेरमा भाँडा माझ्नेबाहेक पाल्तु जनावरलाई खुवाउने काम गरेका थिए । १५ वर्षमा स्कुल छाडेका गायक अहिले ‘ब्रायन एडम्स फाउन्डेसन’ मार्फत शिक्षा क्षेत्रमा पनि सक्रिय छन् । फोटोग्राफीबाट आउने आम्दानीले फाउन्डेसन चलाएका एडम्सले विश्वका विभिन्न ठाउँमा ठूला विपत् पर्दा सहयोगका लागि रकम जुटाउन पनि कार्यक्रम गर्ने गर्छन् ।